Fomba amam-panao Kolombiana | Vaovao momba ny dia
Maria | | America, Kolombia
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fitsangatsanganana traikefa tena mahaliana dia ny fahafantarana ny fomba amam-panao samihafa manerana an'izao tontolo izao. Any Kolombia ihany koa, izay miankina amin'ny faritra (Karaiba, Pasifika, Los Llanos, Los Andes ary Amazonía) dia mitahiry ny fomban-drazany avy ny fiarahamonina tsirairay. Na izany aza, misy ihany koa fomba amam-panao izay iraisan'ny Kolombiana rehetra. Hodinihinay eto ambany ny sasany amin'izy ireo.
1 Be fanantenana i Kolombia
2 Ho an'ny arepa manankarena!
5 Fetin'ny labozia
6 Misy zavatra tokony hankalazaina?
7 Fanatanjahantena nasionaly
Be fanantenana i Kolombia
Kolombia dia iray amin'ireo firenena sambatra indrindra sy be fanantenana indrindra eran'izao tontolo izao ka tsy mahagaga raha miavaka amin'ny Kolombiana ny olona tia olona sy falifaly izay tia resaka mahafinaritra sy mahafinaritra. Ny fahafinaretana amin'ny fiainana dia ankasitrahana mora foana amin'ny filan-kevitry ny fety izay ananany amin'ny fotoana rehetra.
Ho an'ny arepa manankarena!
Io lovia kolombiana mahazatra io dia lanina amin'ny ora rehetra amin'ny andro ary isaky ny faritra amin'ny firenena dia vita amin'ny fomba iray izy io, na dia samy manana ny fotony avokoa aza: katsaka.
Ny morontsirak'i Kolombia dia manana arepa miavaka, ny atody. Amin'ny alàlan'ny fanomanana mahay sy marefo dia tratra koba katsaka endasina feno atody nandrahoina. Mahafinaritra! Ho azy ireo, ny Paisas dia mahandro ny arepa fanta-daza indrindra: vita amin'ny katsaka fotsy sy fotsy izay azo ampiana miaraka aminy (fromazy, chorizo, atody atody, tsaramaso…). Ny arepa de choclo vita amin'ny katsaka mamy kokoa ary aroso miaraka amin'ny fromazy sy dibera vaovao dia malaza be koa.
Na izany aza, ny arepa hafahafa indrindra dia ny santandereana izay voaomana amin'ny lavenona hazo natsonika tao anaty rano, katsaka mavo, yucca na ravin-kisoa voatetika. Nefa misy maro hafa, lisitra tsy misy farany ka tsara indrindra raha manandrana azy ireo ianao.
Any Kolombia, na aiza na aiza alehanao dia hahita arepas sy tinto ianao (na kaopy kafe mainty). Ary ny firenena amerikana no mpamokatra kafe fahefatra eran'izao tontolo izao ary voalohany rehefa miresaka ny haleman'ny tsaramaso isika.
Ny fonosana kafe Kolombia tena izy dia mety ho fahatsiarovana tsara indrindra azonao raisina avy any Kolombia. Isaky ny mandatsaka kaopy ianao dia hanitra ny hanitra manitra avy aminy.
Ny Krismasy dia iray amin'ireo fankalazana ankalazaina amin'ny hafanam-po indrindra any Kolombia. Hatramin'ny 16 novambra, ny trano, ny fivarotana ary ny birao rehetra dia voaravaka hanombohana ny fankalazana ny novena. Fanao any Kolombia ny mahatadidy ny sivy andro ny dia nataon'i Maria sy i Josefa talohan'ny nahaterahan'i Jesosy niaraka tamin'ny vatan-kazo krismasy, mpiambina ary donut. Ary maninona no tsy? Miaraka amin'ny rumbita miaraka amin'ny marika.
Ny iray amin'ireo fomban-drazana any Kolombia amin'ireto daty ireto dia ny fanomezana dia entin'ny Child God ho an'ny ankizy ny alin'ny 24 Desambra fa tsy i Santa Claus toy ny any amin'ny firenen-kafa.
Etsy ankilany, mandrehitra jiro tsara tarehy misy endrika hafa haingo ny tanàna ary mifaninana amin'ny loka aza. Nanjary nahasarika mpizahatany mihitsy aza io.
Kolombia dia mamaritra ny tenany ho fanjakana laika fa raha ny fampiharana dia firenena katolika tena izy io ary ny fankalazana dia mihodina manodidina an'io finoana io, toy ny ny Andron'ny labozia, raha mandrehitra labozia sy lanternaly ny firenena iray manontolo ho fanomezam-boninahitra ny Immaculate Conception amin'ny marainan'ny 7 ka hatramin'ny 8 desambra.
Na izany na tsy izany, ity fankalazana ity dia manamarika ny fiantombohan'ny vanim-potoana Krismasy ary maro no mankalaza ny hetsika amin'ny fety tsara.
Misy zavatra tokony hankalazaina?
Any Kolombia, ny fialan-tsiny rehetra dia tsara raha miaraka amin'ny namana na fianakaviana ary mandihy mandra-pahamarain'ny andro miaraka amina vera misy marika. Izy io dia liqueur anise tena ankasitrahana ao amin'ny firenena izay atolotra amina tifitra ary matetika ampiana rano mangatsiaka iray vera raha sanatria ka lasa mahery ireo zava-pisotro voalohany. Dia tsy hita intsony ny tohiny.
Ary inona no hatao amin'ny fety raha tsy misy mozika? Ny Kolombiana dia tia mampiala voly azy ireo amin'ny rumba, salsa, reggaeton, cumbia, vallenato ary ny gadona hafa rehetra izay azo dihy hahafinaritra.
Tahaka ny fampiakaran'ny baolina kitra ny filan'ny nofo amin'ny fanatanjahantena amin'ny firenena maro, ny lalao bisikileta any Kolombia no fanatanjahantena nasionaly rehefa mandeha amin'ny làlan'izao tontolo izao ny mpitaingina bisikileta Kolombiana. Na amin'ny fotoanan'ny Giro, ny Tour na ny Vuelta, dia mijanona ny firenena.
Raha miresaka fanatanjahantena nasionaly, shuffleboard dia hetsika iray tena lehibe ho an'ny Kolombiana. Izy io dia misy ny manipy ny yew ao anaty lovia iray izay ametrahana ny wick pulpder amin'ny halavirana lavitra. Ny mpandresy dia ny mpandray anjara izay mamoaka ny hevi-dehibe indrindra ary mameno ny isa 27 voalohany.
Fantatrao ve ireo fomba amam-panao any Kolombia? Iza amin'izy ireo no hitanao fa liana indrindra? Misy olon-kafa tianao zaraina ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Fomba amam-panao Kolombia
Fomba amam-panao Breziliana